Kedu ihe bụ B2C CRM kacha mma maka obere azụmaahịa gị? | Martech Zone
Mmekọrịta ndị ahịa abịawo ogologo oge kemgbe mmalite ha. Echiche B2C (Azụmaahịa Ahịa) agbanweela gaa na echiche UX karịa karịa ịnyefe ngwaahịa ikpeazụ. Họrọ ezigbo njikwa mmekọrịta ndị ahịa maka azụmaahịa gị nwere ike ịbụ aghụghọ.
Dabere na ọmụmụ, 87% nke azụmaahịa na-eji igwe ojii CRM arụ ọrụ nke ọma.
18 CRM Statistics Need Kwesịrị formara maka 2020 (na karịrị)
Na plethora nke nhọrọ ndị i nwere, ọ nwere ike ịbụ ihe na-agwụ ike na nrụgide ịhọrọ nke ziri ezi. Ka anyị leba anya na ụfọdụ ihe atụ ama ama na otu ị ga - esi họrọ ezigbo ngwa ọrụ maka mkpa obere azụmaahịa gị.
Etu esi ahoputa CRM
Tupu anyị aba n'ime ya, ọ dị mkpa ịtọ ụfọdụ njirisi na okwute. Nke mbụ, ọ dịghị ngwaọrụ CRM abụọ bụ otu - nke ọ bụla nwere nhọrọ nke ya.
Chohọrọ nke ziri ezi na-abụkarị site na ntụgharị uche onwe onye site n'akụkụ ụlọ ọrụ ahụ, ọkachasị banyere ihe ị chọrọ. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ụfọdụ na-ebute ahịa ụzọ, ndị ọzọ na-ahọrọ nsuso na nyocha zuru ezu. CRM ziri ezi ga-enwekwa mmetụta dị mma na usoro ịre ahịa ọdịnaya gị, na-enyere gị aka ịhụ ụdị nke ọdịnaya na-eduga ndị ọzọ. Ka anyị leba anya n’ajụjụ ụfọdụ ga - enyere gị aka ikpebi CRM zuru oke maka azụmaahịa gị:
Nha azụmahịa gị
Kedu nnukwu azụmahịa gị?
You na-arụ ọrụ mba ụwa ma ọ bụ nke ụlọ?
Ndị ọrụ ole ka ị nwere ma ị na-agbasa?
Kedu data ị na-ahazi kwa ụbọchị ma ọ na-agbasa?
Ọrụ teknụzụ nke azụmahịa gị
Kedu ụdị ndị ọkachamara ị nwere na ụgwọ ọrụ gị?
Have nwere ndị nyocha data na ndị ahịa dị?
Kedu otu ngwa ahịa ndị ahịa gị na usoro ahịa si akpaghị aka?
Ihe mbu nke ahia gi
Gịnị bụ gị mkpa mgbe ọ na-abịa ahịa afọ ojuju?
Ego ole ka itinye ego na ahia na mgbasa ozi?
Kedu otu usoro ọrụ gị siri kwalite ma enwere nsogbu ọ bụla?
55% nke ndị nwe ụlọ ahịa na-arịọ maka ịdị mfe nke ojiji na CRM ha karịa ihe niile.
12 Amazing CRM chaatị dị iche iche Don't Na-achọghị Agbaghara
Ozugbo ị zarachara ajụjụ ndị a niile, ị ga-enwe nghọta doro anya karị na ebumnuche nke ihe ọ dị gị mkpa. Ọ dị mfe ịkọwapụta ma họrọ CRM nke na-adịghị adabara gị, naanị na ịghaghachi azụ na nke dị iche na mgbe e mesịrị. Ugbu a anyị nwere nghọta doro anya karị maka ịhọrọ ezigbo CRM, ka anyị lelee ihe atụ ndị ama ama.
Ọ bụrụ n'ị na-achọ ezigbo njikwa na ịhazi usoro CRM, Agile CRM kpuchiela gị. Ngwaọrụ a na - etu ọnụ maka akpaaka na nhọrọ nchịkwa nhọrọ nke nwere ike ịhazi njikwa mmekọrịta ndị ahịa gị na leta ahụ.
Emere ya nke ọma site na iji obere azụmaahịa n'uche ma ọ nweghị ụfọdụ nnukwu ụlọ ọrụ nhọrọ ị ga-ahụkarị na CRMs. Agbanyeghị, Agile CRM na-abịa nkwado zuru oke maka plugins na wijetị nke pụtara na ị nwere ike ịhazi ya ka ọ dabara maka mkpa azụmaahịa gị n'ụzọ zuru oke.
Nleta Agile CRM
Ọ bụrụ na ị na-achọ ahịa ahịa CRM maka azụmahịa gị, elela anya karịa Pipedrive. A haziri ọrụ ahụ kpọmkwem na ire ahịa na-aga n'ihu na etiti ahụ, nke pụtara na ọ na-abịa juputara n'ọtụtụ ọnụọgụ ahịa.
Ihe nkenke interface na siste na ịdọrọ-na-dobe UI hụ na ndị otu gị ga-arụ ọrụ ngwa ngwa ma nwee ntụkwasị obi. Pipedrive ọbụlagodi na-enye ohere maka njikọta ozi email nke pụtara na ndị ahịa gị agaghị etinye aka na taabụ dị iche iche ma gbado anya na ịrụ ọrụ ha.
Ọla kọpa (formally Prosperworks) bụ CRM nwere njiko zuru ezu nke Google. Nke a pụtara na ọrụ ahụ dakọtara na ngwa na ngwa niile dị na Google, gụnyere Drive, Sheets, na Docs.
Ihe na-ekewa ọla kọpa na CRM ndị ọzọ bụ VoIP ndakọrịta nke na-abata na ọrụ ahụ.
Amari Mellor, Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa Ndị Isi maka Grabmyessay
Nke a na-enye ndị ahịa gị na ndị ahịa gị nkwado ka gị na ndị na-akpọ oku na ndị ọzọ na-emekọrịta ihe na-enweghị isi na ngwaọrụ ahụ pụta. Ọ na-edekọ ma na-echekwa nkata olu maka nyocha ọzọ ma nye gị ohere ịchekwa ma gbanwee data dị mkpa site na Google n'onwe ya. Ọla kọpa bụ otu n'ime CRM ndị ọzọ nwere njiri mara mma ma ọ dị mma maka ọtụtụ obere azụmaahịa na-achọ ngwọta CRM na-adịgide adịgide.
Gaa na ọla kọpa
Dị ka CRM kachasị ọnụ ahịa n'ahịa, HubSpot na-adịgide ruo hyp. Nke a bụ nhọrọ facto maka mmalite na obere azụmaahịa na-emefu ego na-anaghị akwụ ụgwọ. Ọ na-enye ohere maka njikwa ahịa zuru ezu na nyocha data, yana njikọta Gmail n'ime CRM. Nke kachasị mma, HubSpot na-agbanwe ọnụahịa dịka nhọrọ ị na-eji na ngwugwu ị họọrọ.
Ihe ole na ole ị na-eji arụsi ọrụ ike, obere ị ga-akwụ ụgwọ na njedebe nke ọnwa. HubSpot bụ nnukwu ikpo okwu maka nsuso data na njikwa ndị ahịa na-enweghị nhọrọ ọ bụla dị elu dị. Agbanyeghị, nke a bụ obere ihu ala, ebe ọ bụ na imirikiti usoro nyocha na nyocha dị elu enweghị isi maka obere azụmaahịa na-eto eto.
Ọ bụrụ na mmachi ndị ọrụ 10 apụtaghị na ọ bụụrụ gị nsogbu, mgbe ahụ Zoho nwere ike ịbụ CRM zuru oke maka azụmaahịa gị. Zoho bụ CRM bụ n'efu na arụmọrụ bụ isi nke CRM ndị kachasị elu. Ọ na-enye ohere maka njikwa ndị ahịa, nyocha na nkwado site na UI na-arụ ọrụ.
Ejiri Zope kee ya na ndi n’ere ahia ma burukwa njiri mara ya. Nke a pụtara na ndị ahịa gị nwere ike ịmepụta ọnọdụ asọmpi na mbido ma rụọ ọrụ maka ọdịmma ibe ha. Zoho na-enye ikike dị elu na ndenye aha onye ọrụ gbasaa na obere ụgwọ ọnwa. Agbanyeghị, imirikiti obere azụmaahịa na mmalite ga-achọta ọtụtụ njirimara na arụmọrụ na mbipute n'efu.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na njikwa data na nsuso ndị ahịa bụ ihe ị chọrọ, Highrise ga-ekpuchi nke ahụ maka gị. Ejiri ọrụ igwe ojii dabere na nchekwa data igwe ojii n'uche, nke pụtara na echekwabara mmekọrịta ọ bụla nke ndị ahịa na CRM.
Highrise na-arụ ọrụ nke ukwuu n'otu ụzọ ahụ dị ka ngwa njikwa ọrụ yana ndetu nkeonwe, mana ejiri CRM gbagọọ. Nke a pụtara na interface dị ọcha na mfe ịbịa grips na. You pụrụ ọbụna jikwaa gị email anatara na-anapụta ozi gị ahịa site na Highrise na-enweghị iji mail akpaaka ọrụ. Y’oburu na ichoro oru data na ihe nlere maka ahia gi, elekwala Highrise anya.
Gaa na Highrise
CRM gị bụ maka ndị ahịa gị
Chee echiche banyere ndị ahịa gị na mmekọrịta gị na ibe gị mgbe ị na-ahọrọ sọftụwia CRM gị. Kedu nsogbu ndị ị na-enwe ugbu a na ọ ga-amasị gị ịkwụsị? Ajụjụ a dị mfe nwere ike oge ụfọdụ bụrụ ihe niile ịchọrọ iji tinye ego na azịza CRM.
74% nke ndị ọrụ CRM kwuru na ha nwere nkọwa zuru ezu banyere data ndị ahịa mgbe etinyechara ego na CRM.
Ọrụ CRM Software
Ọ dịghị mkpa iji aka gị duzie njikwa ndị ahịa na ọtụtụ atụmatụ-zuru oke na ọnụ ọnụ dị na ya. Were a okwukwe nke okwukwe na-agbalị a ọhụrụ ngwá ọrụ iji hụ ma ọ kwekọrọ gị ẹdude workflow. Nsonaazụ ahụ nwere ike iju gị anya.
Tags: agile crmazụmahịa na ndị ahịaBusiness2Consumerọla kọpaCRMGmailgoogle suiteIsi mmaliteotúEsi họrọ otu crm
COVID-19: Ndị ahịa na ọnụ ọgụgụ ịzụta #StayAtHome
COVID-19: Corona na-efe efe na Social Media